आजभोली के गर्दैछन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू ? – Todays Nepal
आजभोली के गर्दैछन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू ?
दरबारको शान, सौकत र शासन त्यसै दिन ढलेको थियो, जुन दिन कहालीलाग्दो दरबार हत्याकाण्ड भयो । गीत बदलियो, रीत बदलियो । विगत परिमार्जित भएर वर्तमान फरक देखियो । सबै कुरा परिवर्तन नै थियो । हिजोको मामाघर आजको संग्राहलय बन्यो । तर, मन बदलिएन । देश र आमा उस्तै हुन् । जति आमाको माया हुन्छ, त्यति देशको माया हुन्छ । त्यसैले होला स्व. अधिराजकुमारी श्रुति शाह राणाका छोरीहरू बारम्बार सम्झिरहन्छन् आमा र देश ।
वंश नाश भएको बेला पुरै देश शोकमा डुवेको थियो । वीरेन्द्रको वंश विनाससँगै नेपालमा राजतन्त्रको पनि पतनका दिन सुरू भइसकेको संकेत देखिएको थियो ।
पुनः राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रले गद्दी सम्हाले पनि मुलुकको राजनीतिक परिवेशको आँधी बेहरीले दरबारलाई संग्राहलयमा परिणत गरिदियो । त्यहि संग्राहलयमा घरि–घरि झुल्किने गरेका छन् बाल्यकालमा नै गुमाएकी आमादेखि मावलीको सम्झनाका लागि गिर्वाणी र सुरङ्गना राणा ।
श्रुतिको हत्या हुँदा गीर्वाणी राणा तीन र सुरङ्ना दुई वर्षकी मात्र थिइन् । अहिले गीर्वाणी २० र सुरङ्गना १९ वर्षका पुगे । यसअघि गिर्वाणी १४ वर्षको उमेरकी हुँदा मावलीको तस्बिर हेर्नका लागि आर्ट काउन्सिलमा पुगेकी थिइन् ।
त्यहाँ उनी पुरै तस्बिर हेर्न नसकेर भक्कानिएर रोएकी थिइन् । २०६९ सालमा आमाको फोटो हेरेर गीर्वाणीको आँखाबाट आँसु बग्दै गरेको फोटो फेसबुकमा भाइरल भएको थियो । शाही चिकित्सक खगेन्द्र श्रेष्ठले खिचेका पूर्वराजपरिवारको तस्बिर प्रदर्शनी हेर्न बाबु गोरख शम्शेरसितै त्यसबेला पनि उनी गएकी थिइन् ।
गीर्वाणी र सुरङ्गनालाई पिता गोरखले भारतको सिमलामा अध्ययनका लागि पठाएका थिए । उनीहरू कहिलेकाहीँ भने विदा मनाउन काठमाडौँ आउने गर्छन् । ‘उच्च शिक्षाका लागि बाहिर नै रहेका छन् । त्यसकारण पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्पर्कमा देखिने गरेका छैनन्।’, पारिवारिक स्रोतले भन्यो ।
पाकिस्तानले भारतसँग कश्मीरको सट्टा माधुरी दीक्षित मागेपछि…
“कांग्रेसका नेताहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरूले सीमा नाघ्नुभयो भने निकै गाह्रो पर्ला”